विचार | Austro Nepal
एउटा चर्चाको विषय धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन
Rup Rasaili	 Feb 8, 2019 0
‘प्रसाद’ चलचित्रबारे काशी रामको बुझाई
Rup Rasaili	 Dec 17, 2018 0
आफैंमा यसरि जगाउनुहोस् आत्मबिश्वास
Buy Sale Uncategorized अडियो/भिडियो अष्ट्रेलियामा नेपाली कला/साहित्य खेलकुद
साहित्यकार तेजप्रकाश श्रेष्ठ (२००३) नेपाली साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनका व्यक्तित्वका विविध पाटाहरू छन् । कविता, कथा, उपन्यास, नियात्राजस्ता विविध विधाहरूसँगै बालसाहित्य र लोक–संस्कृतिको…
दुःख पाउनु पनि वरदान रहेछ !!
austro	 Nov 23, 2018 0
आनीछोइङडोल्मा! वास्तविक नाम डोल्मा छेक्विद! तर, उनलाई सबैले भुमो नामले बोलाए । भोटिया भाषामा छोरीलाई भुमो भनिन्छ । उनी सधैं भुमो नै रहिन्– सबैकी छोरी । तर आफ्नै बाबुकी प्रिय छोरी कहिल्यै बन्न सकिनन् । सधैं बाबुको न्यानो मायाका लागि…
बच्चाहरुलाई धेरै समय “मोबाइलको” प्रयोग गर्न दिदा आउने समस्याहरु !!
काठमाडौँ, २२ वैशाख (रासस) / के तपाईले आफ्ना नानीहरुलाई मोबाइलको अधिक प्रयोग गर्ने अवसर दिनुभएको छ । मोबाइलको अधिक प्रयोगबाट नानीहरुको आँखामा विस्तारै असर परिरहेको हुन्छ । मोबाइलमा रमाउने नानीहरुको आँखा सुख्खा हुने, दीर्घकालमा आँखामा एलर्जी…